ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ပျဉ်းမကန် ကျေးရွာအနီး ဂျပန်အမျိုးသမီး ခရီးသွားတစ်ဦး အသတ်ခံရမှုဖြစ်ပွား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ပျဉ်းမကန် ကျေးရွာအနီး ဂျပန်အမျိုးသမီး ခရီးသွားတစ်ဦး အသတ်ခံရမှုဖြစ်ပွား
ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ပျဉ်းမကန် ကျေးရွာအနီး ဂျပန်အမျိုးသမီး ခရီးသွားတစ်ဦး အသတ်ခံရမှုဖြစ်ပွား
Posted by moonpoem on Sep 30, 2011 in Myanma News, News | 30 comments
(မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ပျဉ်းမကန် ကျေးရွာအနီး ပဲစင်းငုံစိုက်ခင်း အတွင်း စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် ညနေ ၆ နာရီအချိန်ခန့်က နိုင်ငံခြားသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦး မေ့မြောနေကြောင်း သတင်းအရ ကျောက်ပန်းတောင်း သုဂတိရှင်နာရေး ကူညီမှုအသင်းမှ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် သွားရောက်ခေါ်ဆောင်၍ ကျောက်ပန်းတောင်း ဆေးရုံသို့ပို့စဉ် နိုင်ငံခြားသူ အမျိုးသမီးမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အဆိုပါ သေဆုံးသွားသူ နိုင်ငံခြားသူမှာ ဂျပန်လူမျိုး မစ္စရှီရာမတ်စု ချီဟာရုဆိုသူဖြစ်ပြီး အသက် ၃၀ ၀န်းကျင် ဖြစ်ကြောင်း၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ပုဂံ-ညောင်ဦး မြို့သို့လေယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ညောင်ဦးမြို့ရှိ တည်းခိုခန်းတစ်ခု တွင် တည်းခိုနေသူဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဂျပန်အမျိုးသမီး သည် အခင်းဖြစ်နေ့ နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင် ညောင်ဦးမြို့မှ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့သို့ လိုင်းကားဖြင့် လိုက်ပါလာကြောင်း၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ သာယာအေးရပ်ရှိ ကားဂိတ်ရောက်သောအခါ မောင် — (၃၉ နှစ်) သာယာအေးရပ်နေသူ မောင်းနှင်သော ဆိုင်ကယ်တက္ကစီ အား ငှားရမ်း၍ ပုပ္ပားသို့သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် ကျောက်ပန်းတောင်းမှ ညောင်ဦးသို့ အဆိုပါ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ပြန်လာစဉ် ဆိုင်ကယ်တက္ကစီသမားမှ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ပြုကျင့်ရာတွင် အော်ဟစ်မည်စိုး၍ ပါးစပ်အားပိတ်ရာမှ အသက်ရှူကြပ်၍ သေဆုံးသွားကြောင်း၊ အဆိုပါဖြစ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း ၍ ကျောက်ပန်းတောင်း ရဲစခန်းမှ ဆိုင်ကယ်တက္ကစီသမားအား ဖမ်းဆီးကာ စုံစမ်းစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။) News From Weekly Eleven
ထိုသတင်းကို ဖတ်ပြီးသော အခါ တွေးမိတာတွေက အများကြီးဖြစ်သည်။ သတင်းဌာနတစ်ခုနှင့် တစ်ခု ရေးသားဖော်ပြတာတွေက မတူကြ။ ဆိုင်ကယ်တက္ကစီဒရိုင်ဘာက ဓားနှင့်ထိုးတာ၊ လည်ပင်းညှစ်တာစသဖြင့် ကွဲနေကြသည်။ ပိုပြီးဆိုးတာက ဂျပန်သတင်းဌာနတွေ၏ ရေးသားချက်ကြေညာချက်တွေဖြစ်သည်။သူတို့ သတင်းကြေညာပုံက ပုဂံမြို့တွင်ဖြစ်ပွားသောပုံစံနှင့် ကြေညာသွားသည်။
ပုဂံမြို့ အတွင်း ဆိုင်ကယ်တက္ကစီ ဖြင့် လည်ပတ်ခွင့်မ၇ှိပါ ထိုအရာကို မသိဘဲဂျပန်ဘက်က ရမ်းတုပ်ခြင်း
ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည့်ပတ်လို့ အဆင်မပြေသော၊ ဘေးကင်းသော နိုင်ငံ မဟုတ်ဟု ချဲ့ ကားရေးကြသည်။
ဘာမဟုတ်သည့် လူသတ်ကောင် တစ်ယောက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို အဆိုးမြင်တာ ကျွန်မသည်းမခံနိုင်ပါ။ ပုပ္ပားကိုလာကတည်းက လမ်းမှာ စိုက်ခင်းတွေပဲရှိတာ၊ သွားတဲ့လမ်းတလျှောက်မှာ ဓာတ်မီးတိုင်မရှိတာ သတိထားသင့်သည်။ ပြီးတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနှင့်လည်း ကိုယ့်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်သင့်သည် မဟုတ်လား။ ညနေဘက်အချိန် လူပြတ်သည့် လမ်းမ၊ ၂နာရီကြာအောင်သွားရတဲ့ခရီးတစ်ခုကို အကြောင်းမသိတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့် ဆိုင်ကယ်စီးပြီးသွားသည့် ဂျပန်အမျိုးသမီး၏ သတ္တိကို ချီးကျူးရမည်လား။ ဂရုဏာဒေါသောနဲ့ အပြစ်တင်ရမည်လား။
ဒီလို အမှုမျိုးသည် နိုင်ငံတိုင်းတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော အမှုမျိုးဖြစ်ပါသည်။သို့သော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုလျှင်
အဆိုးမြင်ကြသည်က များသဖြင့် ယခုတစ်ခေါက်လည်းနူရာဝဲစွဲလဲရာသူခိုးထောင်းပြီး ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့်
ဂျပန်အမျိုးသမီးကို သတ်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသူအား ရုံးတင်စစ်ဆေးတော့မည်
ဧရာဝတီ Friday, 30 September 2011 11:52
ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေ ပုဂံ – ညောင်ဦး ဒေသသို့ လာရောက် လာပတ်ရင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့တွင် အသတ်ခံခဲ့ရသော ဂျပန်နိုင်ငံမှ Ms.Shiramatsu Chiharu ၏ အမှုအခင်းတွင် တရားခံဟု ယူဆရသူ ကျောက်ပန်းတောင်း နယ်သား ကိုမင်းသိုက်အား မုဒိမ်းမှု၊ လူသတ်မှုများဖြင့် လာမည့် အောက်တိုဘာလဆန်းတွင် တရားရုံးတင် စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“အလောင်းကို စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ရင်ခွဲစစ်ဆေးတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက် တွေကို ပြောလို့မရပါဘူး။ တရားရုံးမှာ တင်ပြမယ်။ ဒီလူသတ်မှုကို အထက်က လူကြီးတွေကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ် ညွှန်ကြားပါတယ်။ လူသတ်မှုနဲ့ အမှုဖွင့်ထားပေမယ့် မုဒိမ်းမှုမြောက်၊ မမြောက် ဆက်ပြီးစစ်နေပါတယ်။ စစ်ဆေးချက်အရ မုဒိမ်းမှု ပါနိုင်ပါတယ်။ ရက်ပိုင်းအတွင်း တရားရုံးတင်နိုင်မယ်” ဟု မန္တလေးတိုင်း မြင်းခြံခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲအရာရှိကြီးတဦးက ပြောသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသူ အသတ်ခံရမှုအတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးက ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ စေလွှတ်ထားပြီး ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနကလည်း မှုခင်းဖော်ထုတ်ရေး အဖွဲ့များ အားဖြည့်ကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ တပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
အသတ်ခံရသူ Ms.Shiramatsu သည် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်တွင် ရန်ကုန်မှ ညောင်ဦးသို့ အဲပုဂံလေကြောင်းလိုင်းနှင့် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ညောင်ဦးမြို့နယ် ရွှေအိုးကြီးဟိုတယ်တွင် တည်းခိုခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ညောင်ဦးမှ ကျောက်ပန်းတောင်းသို့ ခရီးသည်တင်ကားဖြင့် သွားရောက်ခဲ့သည်။
၎င်းသည် နေ့လယ် ၁ နာရီကျော်ခန့်တွင် ကိုမင်းသိုက်၏ ဆိုင်ကယ်ကို ငှားရမ်း၍ ညောင်ဦးသို့ ပြန်လာခဲ့ကြောင်း၊ ကားလမ်း ဘေးရှိ ရှုခင်းများကို ခရီးသည် အမျိုးသမီးက ဓာတ်ပုံ ဆင်းရိုက်ခဲ့ပြီး ညနေ ၆ နာရီတွင် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ မောင်းသူ ကိုမင်းသိုက်က ခရီးသည်အမျိုးသမီးကို ကျောက်ပန်းတောင်း – ညောင်ဦးလမ်း တနေရာတွင် အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြိုးစားစဉ် လည်ပင်းညှစ်ခံရပြီး သတိလစ် မေ့မြောသွားခဲ့ကြောင်း၊ အနီးအနားရှိ ကျေးရွာဒေသခံအချို့က မသင်္ကာ၍ သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားပြီး ကိုမင်းသိုက်ကို ဖမ်းဆီးကာ သတိလစ်နေသော ခရီးသည်အမျိုးသမီးကို ဆေးရုံတင်ပို့ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း လမ်းခုလတ်တွင်ပင် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကျောက်ပန်းတောင်း ရဲစခန်းက အမှုဖြစ်စဉ်တချို့ကို ရှင်းပြသည်။
ပုဂံ-ညောင်ဦး- ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့များတွင် ဂျပန်နိုင်ငံသူ အသတ်ခံရမှုသတင်းက ပျံ့နှံ့နေပြီး ဒေသခံများက သေဆုံးသွားသော ဂျပန်အမျိုးသမီးအတွက် ၀မ်းနည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြသည်ဟု သိရသည်။
“ဒီဖြစ်ရပ်က ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပါတယ် ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ပါတယ်။ တယောက်တည်း လာလည်တဲ့ အမျိုးသမီး အသတ်ခံရလို့ နောက်ခရီးသည်တွေ လာရဲပါတော့မလားလို့ စိုးရိမ်မိတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ လာလည်တဲ့ဧည့်သည်ကို အိမ်ရှင်တွေက စောင့်ရှောက်ရမယ့် တာဝန်ရှိတယ်။ ဘယ်လိုကြောင့်ပဲ သေသေ၊
ကိုယ့်ပိုင်နက်ထဲမှာ သေတာ ကိုယ့်မှာ လုံးဝ တာဝန် မကင်းဘူး။ အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့သူကို ထိထိရောက်ရောက် အပြစ်ပေးရမယ်” ဟု ပုဂံ ဟိုတယ်တခုမှ အမည်မဖော်လိုသော မန်နေဂျာတဦးက သုံးသပ်သည်။
Ms.Shiramatsu Chiharu သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့အထိ သုံးလဗီဇာဖြင့် လာရောက်လည်ပတ်သူ ဖြစ်သည်။
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်တည်းလာတဲ့ဂျပန်အမျိုးသမီးက ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲမသိ ။ အလည်အပတ်တစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်တည်းလာတာဟာ အန္တရာယ်များပါတယ် ။ ဒါမျိုးတွေလဲဖြစ်တတ်ပါတယ် ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုပေါ့ ။
အသစ်တစ်ယောက်၏၀င်ဖောခြင်း ။ ဂေဇက်မှတစ်သိန်းရရှိလျှင် ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ကား Mr.Guitar တွင် ပွဲတစ်ပွဲလုပ်မည်ဟုတ်ရည်မှန်းထားပါသည်။
မြန်မာ ပြည်ကို တစ်ယောက်ထဲ လာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီးပါ။
လာပြီးပြန်သွားတဲ့ သူတိုင်းက အင်မတန်safe ဖြစ်တယ်ဆို ပြီးပြောကြပါတယ်။ အခုတော့…
အရင် က အဲဒီဘက် က ရွာသားတွေ အကြောင်း
ကြားဖူးနေတာတော့ ကြာပါပြီ ( ပို့ စ်အဖြစ် ရေးတင်ပါဦးမယ် )
အခု နိုင်ငံခြားသူ ကိုပါ လူသတ်ကျူးလွန်တဲ့အထိ
အပြစ်ပေးမှု ပြင်းပြင်းထန်ထန် နဲ့ 
ရုပ်မြင်သံကြား ၊ သတင်းစာ ၊ ဂျာနယ် အားလုံးမှ
ထောက်ခံပါ၏၊ ကြေငြာပေးသင့်ပါတယ်၊ နောက်ထပ်ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပီး ကြားရတာလေး
ရှိခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လို အပြစ်ပေးလိုက်သလဲ ဆိုတာကိုပါ သိခွင့်ပေးပါရန် ။
ခု တင်တဲ့ သတင်းကတော့ မှန်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်…. အစက ကြားရတာက တစ်မျိုးဗျ …
တောနက်ထဲမှာ လိုလို.. ဆိုင်ကယ် က နှစ်စီး လိုလို … အမျိုးသားက နှစ်ယောက်လိုလို…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် .. ဒီသတင်းဆိုးရဲ့ နိဂုံးလေး တော့ သိခွင့်ရချင်သား…
ရက်စက်လိုက်ကြတာ.. အမှောင်ထုရယ် ရမက် စိတ်ရယ် ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ စိတ်မကောင်း
အမှောင်ထု မဟုတ်ပါ။ နေ့လည် ကြောင်တောင်ပါ.. အစိုးရ သတင်းစာမှာ တော့ တစ်ယောက်ပါ. ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူမယ်လည်း ပါကြောင်းပါ။
ယဉ်းကျေးမှုနယ်မြေကို သက်သက်ထိခိုက်အောင် လုပ်သွားတာပါလား။အော် စိတ် စိတ် လူ့ စိတ်များ ခဏလေးမှာ ခွေးစိတ်ပေါက်သွားတယ်။
ဟိုအရင် စက်တင်ဘာတုန်းကလဲ သတင်းလာထောက်တဲ့ ဂျပန်ကြီး သေခဲ့ရပြီးပြီ
သွားပါပြီဗျာ .. ရှိစုမဲ့စု သိက္ခာတွေတော့ ကျကုန်ပါပြီ .. တော်တော်ရက်စက်ယုက်မာတယ် … ယုက်မာတာကစော်ကားလို့ ရက်စက်တာက လူမျိုးကော နိုင်ငံကော အားလုံးကို သိက္ခာချလို့ …. သေဒဏ်ပေးသင့်တယ်ဗျာ … လွှက်တော်မှာ ဘာတွေထပ်ပြီးတင်သွင်းကြမလဲမသိဘူး .. နိုင်ငံခြား ဧည်သည့်တွေတော့ အများကြီးလာစေချင်တယ် ဆွဲဆောင်မှု လုံခြုံမှုကျ နည်းနည်းမှ မရှိဘူး …. တိုးတက်ဦးမယ် …..နိုင်ငံခြားသားတွေလာရင်က သူတို့ကမသိဘူး ဈေးတင်မယ်ဆိုတဲ့ သူချည်းပဲ …. ပြင်သင့်နေပြီဗျို့ အားလုံးကို အယောင်ဆောင်ပြီး ထိရောက်စွာ အရေးယူသင့်နေပြီ … မြန်မာပြည်ကြီးတိုးတက်ပါစေဗျာ ……………
ဗမာ ဆိုတာ ယဉ်ကျေးတယ်၊ သိမ်မွေ့တယ်၊ စသဖြင့် စရိုက်ပြရမဲ့
ပုဂံ ညောင်ဦး ကျောက်ပန်းတောင်း ဆိုတဲ့ အရပ်တွေ လို နေရာမှာမှ
တဏှာရူး တဲ့ ဝဲစား တစ်ကောင်ကြောင့် အပြောခံ ရတော့မယ်။
နိုင်ငံခြားမ တစ်ယောက်ထဲလာလာ တစ်ဖဲ့ ထဲလာလာ ဒီ ဘဲစုတ်က
ကျွန်တော်တို့မြို့မှာလဲ မုဒိန်းမှု တစ်ခု မကြာသေးခင်ကမှ ဖြစ်သွားတယ်ဗျ
ကျွန်တော်က ဒီကောင်တော့ ထောင်တစ်သက်ကျတော့မှာပဲဆိုတော့ အသိ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က နဲတယ်တဲ့..
ဟဲ့ တသက်တစ်ကျွန်းတောင် နဲတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လို လုပ်ချင်လို့လဲဆိုတော့
…… ကုန်းကုန်း လုပ်ပစ်ရမယ်တဲ့ …….
ဒီအဆိုကို လွှတ်တော်မှာတောင် တင်ပြဆွေးနွေးသင့်နေပြီထင်တယ်
ကဲ ကုန်းကုန်းလုပ်သင့် / မလုပ်သင့် မဲခွဲမယ်….
အင်ဒိုနီးရှားကတော့..အခုလိုအမှုတူသူကို… မနှစ်က ထောင်အနှစ်၂၀ချလိုက်တယ်..။
မြန်မာက. (.တိုးရစ်ဇင်နဲ့.၀င်ငွေမြှင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့..) အပြစ်တော်တော်ကြီးကြီးချသင့်တယ်..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…မြန်မာ တိုးရစ်အင်ဒတ်စရီကတော့.. ဂုဏ်သိက္ခာတော်တော်ထိခိုက်သွားတာပဲ..။
ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက. ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကို .တောင်းပန်ပြီး လျှော်ကြေးပါပေးဖို့ကောင်းတယ်..။
20 year jail term for rape and murder of Japanese tourist
Posted Tue, 04/05/2010 – 8:50am by indahnesia
DENPASAR – A judge on Bali has sentenced the 26-year-old David Goltar Wicaksono to 20 years in prison for the rape and murder of the 33-year old Rikasano,aJapanese tourist. The perpetrator, from Malang in East Java, was arrested late last year asasuspect in the case and was indeed found to be guilty now.
The perpetrator first forced his victim into having oral sex with him after he started raping the victim when she already lost her conscience. After he was finished raping her he decided that she should not tell anyone about this, so he killed her cold-bloodedly withablunt object.
A female friend of the victim, Mayumi Sumea, was also beaten but was only hurt in the attack. The perpetrator disguised himself asapoliceman to reach the two women. He was to conductadrugs search in their room. When he was with the women, the drunken man was notacop at all, but justaplain murderer.
The convict hoped to getareduced sentence be cause he plead guilty to the crimes he committed and he also showed remorse. The judges however did not buy this and still handed outa20 year jail term. Representatives of the Japanese consulate on Bali were present in court when the sentence was handed out.
ပြီးတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနှင့်လည်း ကိုယ့်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်သင့်သည် မဟုတ်လား
ညနေဘက်အချိန် လူပြတ်သည့် လမ်းမ၊ ၂နာရီကြာအောင်သွားရတဲ့ခရီးတစ်ခုကို အကြောင်းမသိတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့် ဆိုင်ကယ်စီးပြီးသွားသည့် ဂျပန်အမျိုးသမီး၏ သတ္တိကို
In my opinion ” ချီးကျူးရမည် ”
Most of the foreigners are independent & brave.
They travel all over the world, not only Myanmar.
” နိုင်ငံခြားမ တစ်ယောက်ထဲလာလာ တစ်ဖဲ့ ထဲလာလာ “
ကျွန်တော် အဲဒီသတင်းကို သတင်းစာထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်
ကိုမှော်ဆရာ ပြောသလို ကုန်းကုန်း လုပ်ပြစ်မယ်ဆိုတာ။
သိပ်တော့ သဘောမကျဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အခုခေတ်က ဖြတ်ဖောက်ချုပ်တွေ ခေတ်စားနေတဲ့ အချိန်လေ။ တော်ကြာ…………….
အဲဒီတော့ သူ့ကိုလည်း သူများကို အတင်း အဓမ္မမုဒိမ်းကျင့်ရင် ဘယ်လို ခံစားရလည်းဆိုတာ သိအောင်သူ့ကိုလည်း အဲဒီလို ယောကျာ်းချင်း ကျင့်ပစ်သင့်တယ်။ ဒါမှ နောက်လူတွေ မလုပ်ရဲမှာ………ဟီး
အဲဒီထဲမှာမှ မုဒိမ်းလူသတ်မှုဖြစ်တဲ့ အတွက် သေဒဏ်ပါ ပေးသင့်တယ်။
ဘယ်လိုပေးမလည်းဆိုတော့ သူ့ငယ်ပါကို ထန်းလျက်လောင်း၊ ပြီးရင် ခါကျင် အုံလိုက်တင်ထားလိုက်…..ဟီး
လုပ်စရာ အဲလောက်ရှားလား အောက်တန်းစားကောင်ဗျာ..
သူကို သေဒဏ်ပေးရင် တစ်ခါတည်းသေသွားမှာ.. မကောင်းဘူး.. အဲဒီတော့ အပေါ်က ရွာသူ၊ရွာသားတွေပြောတဲ့အတိုင်း ကုန်းကုန်းဖြစ်ဖြစ်၊ ခါကျင် အုံးဖြစ်ဖြစ် အပြစ်ပေးသင့်တယ်.. ဒါမှ မှတ်မှာ
ဘယ်နှယ့်ဗျာ ကိုယ်နိုင်ငံလာလည်တဲ့ ဧည့်သည်လဲ ဖြစ် မိန်းကလေးလဲဖြစ် ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ နှမသားချင်းကိုယ်ချင်းစာရမှာပေါ့..
ဒီလောက်ဖြစ်တဲ့ကောင် နွားမ လေးငါးကောင်နဲ. မနားတမ်းလွှတ်ပေးလိုက်ကြပါဗျာ…
အလည်ခရီးဆိုကတည်းက တစ်ယောက်တည်းလာလျှင် ဘယ်လောက်ပျင်းစရာကောင်းလဲနော် … အထူးသဖြင့် သူများနိုင်ငံကို လည်ပတ်တဲ့ အခါမျိုးမှာ လုံခြုံတယ် ၊ မလုံခြုံဘူး ဆိုတာထက် .. စာကားပြောဖော် တိုင်ဖင်ဖော် … အဖော် တစ်ယောက်ယောက်တော့ ပါခဲ့သင့်တာပါ … ။
မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပဲ … ဦးနှောက်အသိဥာဏ်နည်းပါးတဲ့ လူတွေကတော့ … သင့်ဧ။် မသင့်ဧ။် မစဉ်းစားပဲ ဆင်ခြင်ဥာဏ်မဲ့သွားတဲ့ ခဏမှာ … စာရိတ္တ အစွန်းထင်းဖြစ်သွားစေမယ့် ကိစ္စတွေ လုပ်တတ်ကြတယ် … ။ ထိုက်တဲ့ အပြစ်ဒဏ်ခံရမှာပါပဲ … ။
သေဒဏ်ချမှက်သင့်ပါသည်…. နောက်နောင်မည်သူမှ မကျူးလွန်ရဲအောင် စံနမူနာပြသင့်ပါသည်…
မြန်မာနိုင်ငံ၏သိက္ခာကို များစွာကျဆင်းစေသောကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေ တဲ့ နိုင်ငံခြားသားအချို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကို ဖျက်ဆီးပစ်နေသလိုပါပဲ။ ထိရောက်သောအပြစ်ပေးမှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ် …
အင်း ကိုယ်.နိုင်ငံကို အလည်လာတဲ.သူကို အဲလိုလုပ်လိုက်တော. နံမည်ပျက်တာပေါ.ဗျာ
အ၇င်ကမှ တိုင်းပြည်ကို နှိမ်ကြပါတယ်ဆို အခုတော. ပိုတောင်ဆိုးအုံးမယ်
နိုင်ငံခြားသူကလည်း ဘယ်တွေတွေ ၀တ်လာလည်းဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာပဲဗျ
သိတဲ.အတိုင်း ရွာသားတွေဆိုတာ အတိုအနှံ.မြင်ဖူးတာမဟုတ်ဘူး မြင်ရရင် xxxxxxxxx
နယ်ကလူတွေတောင် တစ်ချို.က လိုင်းကားစီးရတာ ပျော်သတဲ. စဉ်းစားသာကြည်.တော.
ကိုရွှေဘိုသားပြောသလိုနိုင်ငံခြားသူတွေ အဝတ်အစားနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုပေမယ့်ကိုယ့်နိုင်ငံကိုကမ္ဘာ့ အလယ်မှာမျက်နှာငယ်ရမယ့် အလုပ်မျိုးလုပ်တာကတော့ လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ် ကိုယ့်နိုင်ငံသူတွေ သူများနိုင်ငံသွားလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီး အသတ်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်တွေ စိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးလေ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိတဲ့ သူတချို့ကြောင့်ခုလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာေ တ်ာတော်စိတ်မကောင်းစရာပါပဲနော်….
ရက်စက်တယ်ဆိုတိုင်း ၅နှစ်အမှုကို ၁၅နှစ်ပေးလို့မရပါဘူး။ တခြားဘာပုဒ်မနဲ့ညိတယ်ဆိုတာ ဆန်းစစ်ရပါမယ်။ ဥပမာ -မုဒိန်းမှု ၊ နိုင်ငံခြားခရီးသွားလုပ်ငန်းအား နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးမှု သိက္ခာချမှု၊ နိုင်ငံတော်သိက္ခာချမှုမျိုး ၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာ ရက်စက်သူဖြစ်ရင် သူရဲ့ရက်စက်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အပြစ်ပေးမှု တရားဥပဒေမှာ ရှိရပါမယ်။
သူငယ်တန်းကတည်းကသာ sex ကိစ္စတွေသင်ပေးလိုက်ရင် ပိုတောင်များလာဦးမယ်။ sex ကိစ္စကိုသင်ပေးမယ်ဆိုရင် မုဒိန်းမှုတွေ တိုးမလာအောင် ပြည့်တန်ဆာ လိုင်စင်တွေပါထုတ်ပေးသင့်တယ်။
သေတန်ရာသည်ကို သိလျှက်နှင့် ကျူးလွန်သောအမှုဖြစ်ပါတယ်။
လည်းပင်းညှစ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ပါးစပ်နှာခေါင်းပိတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် အသက်ရှုကျပ်ပြီးသေနိုင်တယ်ဆိုတာ အရွယ်ရောက်သူတိုင်းသိတဲ့အပြင် ဆက်တိုက်အသက်ရှုကျပ်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ကြာမှသာ သေနိုင်တာကြောင့် ရုတ်တရက် မတော်တဆ ပြုလုပ်မိတယ်လို့ လျှောက်လဲလို့ မရနိုင်ပါ။ ပြီးတော့ စံပြအဖြစ် ပြစ်ဒါဏ်ချရမယ့်အမှု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုလူပြတ်တဲ့ခရီးမျိုးကို အဖေါ်မပါပဲ ဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်ရင် ကျားဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ် အန္တရယ်တွေ့နိုင်တာပါပဲ။
အခြားနိုင်ငံတွေမှာလဲ ဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခပ်ဆင်ဆင်ဟာမျိုးတွေ ထိုင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားမှာ ဖြစ်ဖူးကြတာတော့ ကြားမိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်မှပဲ အခြားနိုင်ငံတွေက အုန်းအုန်းထ အဖြစ်သည်းပြကြတာတော့ မတရားဘူးလို့ယူဆပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လူမျိုး မိန်းမငယ်လေးတွေ ထိုင်းမှာ ယူအေအီးမှာ အခြားနိုင်ငံတွေမှာ အနိုင်ကျင့်ခံရ အသတ်ခံရတာတွေကျတော့ ဘယ်နိုင်ငံမှ အဖြစ်သည်းမပြဘူး။
အင်း………..ေ-ွးမသားကိုယ့်အစိုးရတောင်မှ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ် :((
အေးဗျာ ပြောရရင် ဂျပန်တွေလဲမြန်မာမတွေ ကိုစော်ကားတာပဲ၊ (ကမ္ဘာစစ်တုံးကဆို ပိုးဆိုးပတ်စက်ပေါ့) ခုမြန်မာမှာဖြစ်တော့မှ အရမ်းအဖြစ်သည်းပြနေတာကတော့
တရုတ်ကား တွေ ထဲ က လို
တဒင်္ဂ စိတ်ကြောင့်များလား.. အစောကြီးကတည်းက ရည်ရွယ်ကြံစည်ထားတာလား..
အချိန်ကလည်း ၆နာရီဆိုတော့ မမှောင်လှသေးပါဘူး။
လူ့စိတ်ဆိုတာ တော်တော် မြန်ဆန် လှပါလားနော်..
အသိပညာ နည်းလို့ ဖြစ်တာ ဆိုရင်တော့ ပညာပေး အစီအစဉ်တွေ ပါတွဲပြီး အဓိက ထားလုပ်ပေးသင့်တယ်။ ဆိုင်ကယ် ဒရိုင်ဘာတွေ ခရီးသွားတွေ ကို စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင် လုံခြုံ အေးချမ်းအောင် လမ်းညွန်မှုတွေ လုပ်ပေးသင့်တယ်။
တဒင်္ဂ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ ကြိူတင် ကြံစည်ခြင်း မဟုတ်နိုင်ပါ။
ဂျပန်မ(၃၀ နှစ်) က ညောင်ဦးကို ကားနဲ့ ပြန်ဖို့ လက်မှတ်ဝယ်ပြီးမှ ကားခပြန်တောင်းပြီး မော်တော်ဆိုင်ကယ် ငှါးပြန်တာပါ။ ဒါကြောင့် ကြိုတင်ကြံစီတာ မဖြစ်နိုင် လို့ ယူဆမိပါတယ်.။
နေ့လည် တစ်နာရီ မှာ ။ လမ်း တလျောက် ဓါတ်ပုံရိုက်လာပါတယ် ။
စဉ်းစား ကြည့်ရင် ဆိုင်ကယ်နောက်မှာ ဂျပန်မ ဘယ်လိုထိုင် လိုက် လာမလဲဆိုတာရယ်။ အဲ့ဒိ အထိအတွေမှာ သာယာလာမှာရယ်၊လမ်းတလျောက်မှာ ရင်းနှီးလာတဲ့ အနေအထားရယ် မှာ
Don Juan Ronald ပြော သလို ဂျပန်အပြာကားတွေ ဘယ်လောက်ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်မိသလဲ ဆို တာ ရယ် ၊ ဟိုကဖော်ဖော်ရွေရွေ ဆက်ဆံ တာကို ပိုင်ပြီ ဆို ပြီး ကြိုးစားကြည့်ရာ ကနေ မထိန်းနိင်ဘဲ လက်လွန်သွားပုံ ရပါတယ်၊။
ဂျပန်မ အော်တဲ့အခါမှာ မအော်အောင် လုပ်မိလုပ်ရာလုပ်ရင်း ကျောပိုးအိတ်က ကြိူးနဲ့ လည်ပင်းကို ရစ်ပါတ်ဆွဲခေါ်မိရာမှ ဂျပန်မ သတိလစ်သွားကြောင်းနဲ့ အနီးအနားက ကောက်စိုက်သမတွေက အော်သံကြား လို့ အဲ့ဒီကောင်ကိုဝိုင်းဖမ်းပြီး အကူအညီတောင်း
ဆေးရုံပို့စဉ်မှာ ဆုံးသွားတယ်လို့ဆို ပါတယ်။
ဂျပန်မ အနေနဲ့ မြန်မာပြည်လမ်းအနေအထားတွေ ကောင်းကောင်းမသိဘဲ ဂျပန်လို လူမပြတ်ဘူးထင်တာ ရယ် . နေ့ခင်းရယ်ဘဲဆိုပြီး အတင့်ရဲလိုက်မိပုံ ရပါတယ်.။
မြန်မာပြည်ဟာ အလွန်လုံခြုံ Safe ဖြစ်တယ်. နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဖော်ရွေကူညီတယ်
နယူးယောက်တို့ လန်ဒန်က လမ်းတွေထက် ပို လုံခြုံတယ် ဆိုပြီး နိင်ငံခြားသားတွေ ချီးကျုးနေတာ တွေ ..
အခုတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ တဒင်္ဂ အမှားတစ်ချက် ကနေ …….
so sad as Myanmar hasareputation as being one of the safest destinations in SE Asia.
To anyone who reads this-Do not be put off from visiting Myanmar “The Golden Land”, this is very muchaone off and you areasolo traveller then just take the normal sensible precautions.
Other than the danger of falling down holes in the pavement, I would feel happier that my daughter walked in the evening in downtown Yangon than areas of London, NY and SF.
ခုခေတ် midea တွေကဒီလောက်မြန်တာ၊မနေ့ညကတည်းက ကျနော်တို့ ထိုင်ဝမ်မှာသိနေပြီ။ဒီထိုင်ဝမ်းမှာလည်းအဲလိုဖြစ်ဘူးတယ်၊ တက္ကစီကားသမားနဲ့ ဂျပန်မဘဲ၊ဒါပေမယ့်ကြာပါပြီ။
ဒီကောင်လေး Japan Adult vedeo ကြည့်များသွားလို့လားမသိဘူး၊လူငယ်ဆို အဲဒီရုပ်ရှင်ထဲက ဇါတ်လမ်းကို အဟုတ်မှတ်ပြီးလျှောက်လုပ်တာနေမှာ၊ ရွာမှာအဲလိုကားမျိုးပြတာရှိရင် အရင်လိုက်ဖမ်းရမှာ။